Taunggyi - The Cherry Land: ကျွန်တော်နှင့် တောင်ကြီး နည်းပညာတက္ကသိုလ် (၁)
တောင်ကြီး မြို့ အစွန်းကနေ ကျောင်းနဲ့ အေးသာယာကို မြင်ရတာပါ။
မုံတ၀ဂူသွားတုန်းက ရိုက်ခဲ့တဲ့ ပုံပါ။
အဝေးမှ မြင်ရသော ကျောင်းပုံ
စက်မှုဇုံသွားတဲ့ လမ်းဘက်ကနေ ရိုက်ထားတဲ့ ပုံပါ။
တောင်ကြီး နည်းပညာတက္ကသိုလ်က ကျွန်တော်တက်တုန်းကတော့ ကောလိပ်ပဲ ရှိသေးတာပါ။ အစိုးရ နည်းပညာ ကောလိပ် (အေးသာယာ) လို့ အဲ့ဒီတုန်းက ခေါ်ပါတယ်။
B.Tech Project လုပ်တုန်းက ရိုက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကျောင်းပုံတွေ၊ ကျောင်းတုန်းက သူငယ်ချင်းပေါက့်စတွေရဲ့ ပုံတွေ၊ ဆရာဆရာမပုံတွေ၊ ဆရာကန်တော့ပွဲတုန်းက ပုံတွေကို အမှတ်တရ အနေနဲ့ တောင်ကြီးချယ်ရီမှာ တင်လိုက် ပါတယ်။
ရေးသားသူ yma အချိန် 12:00:00 PM
အညွှန်း: VirtualTour, အမှတ်တရ
ကျောင်းကြီးကတော့ ရေလည် မိုက်သွားပြီ.. ဓာတ်ပုံ ဆရာ တော်တာလည်း ပါမယ်ထင်တယ်။ :)
Tuesday, August 07, 2007 1:29:00 PM
မရိုက်တက်ရိုက်တက် ရိုက်ထားတဲ့ ပုံတွေပါဗျာ.. :)
Tuesday, August 07, 2007 10:10:00 PM
I saw this Technical Institute from afar on my way to Inle Lake last December. It does look grand but so isolated. Are there hostels nearby for the students and faculty staff?
Thursday, November 22, 2007 1:24:00 AM
အခု Isolated မဖြစ်တော့ဘူး။ အေးသာယာက စည်ကားလာလို့ ကျောင်းက မြို့အလည်နီးပါရောက်နေပြီ။ Hostel တွေလဲ ကျောင်းနားမှာရှိပါတယ်။ ဆရာ၊ဆရာမတွေ အတွက်လဲ အဆောင်တွေ ရှိပါတယ်။ အရင် ကျောင်းဆောင်တွေမှာ ဆရာဆောင်တွေ ပါပါတယ်။ လုံးချင်းအိမ်တွေ၊ ၂ထပ်ဆောင်တွေ ရှိပါတယ်။
Monday, July 25, 2016 3:39:00 PM
Saturday, November 19, 2016 3:59:00 PM
Esto ya suena como una pieza difícil de replicas relojes clonar y la verdad es que he visto un montón de mal hecho relojes de péndulo falso. Tuve que conseguir una buena para mí porque me gustó desde el principio, pero no puedo comprometer la calidad. Usted encontrará una gran cantidad de réplicas de relojes Tag Heuer Pendulum con movimiento de cuarzo (batería) y algún diseño para imitar el mecanismo real, pero no podía conformarse con ellos y no podía esperar imanes tampoco. Sin embargo, aquí está mi mejor versión de la etiqueta de Pendulum Grand Carrera réplica modelo hasta el momento.
El oscilador, que se puede veralas 8 en punto replicas rolex es en realidad una espiral, pero se mueve tan rápido que tiene que miraraverlo. Es accionado por un movimiento manual japonés que usted tiene que enrollar cada día si usted elige replicas breitling llevarlo diario. Todo el dial negro tiene los grabados simples simples del Tag Pendulum bien clonado incluyendo la mano pequeña de los segundos de5horas. Esta es una pieza de acero inoxidable y parece que esta es la versión más popular entre los relojes Tag falsos. El original es mucho más deportivo replicas omega y viene en un dial negro en un caso negro con el negro Grand Carrera perforó la goma.
Friday, March 10, 2017 11:46:00 AM
Monday, December 17, 2018 1:11:00 PM
Friday, December 21, 2018 2:05:00 PM